माघ ८, २०७८ ०६:१३:०१
नारावाजीका बीच बजेट पास भएपछी ओलीले भने: ‘पेलुन् न पेलुन्, कतिसम्म पेल्छन्’ आश्विन ४, २०७८
देवघाटको वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धालाई प्रेस चौतारी चितवनले खुवायो दर भदौ २३, २०७८
भारतमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न उच्च अदालतको आदेश भारतको इलाहावाद उच्च अदालतले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न आदेश दिएको छ । साथै गाईको संरक्षणलाई मौलिक अधिकार भित्र राख्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । भदौ १७, २०७८
बलिउड कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको निधन बलिउड कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको हृदयघातका कारण निधन भएको छ । उनी ४० बर्षका मात्र थिए । उनको पार्थिव शरीरलाई अहिले मुम्बइको कपुर अस्पतालमा राखिएको छ भारतिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । उनको शरीरको पोस्टमार्टम गरिनेछ । भदौ १७, २०७८
प्रधानमन्त्री देउवाले पाए विश्वासको मत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । भर्खरै सकिएको मतदानमा उनले मत प्राप्त गरेका छन् । श्रावण ३, २०७८
भीम रावलले दिए सांसद पदबाट राजीनामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। श्रावण ३, २०७८
अस्पतालबाटै झलनाथको अपिल: 'देउवालाई मत दिनुहोस, यो ऐतिहासिक सरकार हो' नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन अपिल गरेका छन् । श्रावण ३, २०७८
सर्वोच्चद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी, सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक: देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरित गरिएको कदमलाई सच्याएको उनले बताए । असार २८, २०७८
माधव नेपाल निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा आज साँझ ५ बजे विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो । असार २८, २०७८
सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचनका सबै कार्यक्रम स्थगित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै निर्वाचनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । असार २८, २०७८
नेकपा एमालेमा ओली र नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमति सत्तारूढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई कार्यदलको बैठकले टुङ्ग्याएको छ । असार २७, २०७८
एमाले नेताका गीत गाउने राईसहित २९ कलाकार कांग्रेसमा प्रवेश असार २६, २०७८
डोजरले हानेर वडाध्यक्षको हत्या सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा डोजरको बकेटले हिर्काएर वडाध्यक्षको हत्या भएको छ । गए राति ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ३ भक्तिपुर का वडा अध्यक्ष सुर्यकुमार श्रेष्ठलाई डोजर चालकले जेसिबको बकेटले ठक्कर दिएर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं. ३ रहेको मुखलाल बाध सीमाङ्कन करिव १८–१९ दिनदेखि मर्मत भैरहेको थियो । उक्त मर्मत गर्न भाडामा प्रयोग भएको डोजर ड्राइभरले जेसिबको बकेटले ठक्कर दिएर हत्या गरेको हो । राति अबेरसम्म वडाध्यक्ष श्रेष्ठ, जेसिबीका ठेकेदार प्रेमराज दाहाल र जेसिबी चालक रविन भन्ने हर्कबहादुर तामाङले नजिकैको होटलमा सँगै खाजा खाएका थिए । खाजा खाएपछि उनिहरुबीच समान्य बिवाद भयो । बिवादकै क्रममा मुखलाल बाध नजिक पुगेपछि चालक तामाङले जेसिबी चलाएर वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जेसिबको बकेटले ठक्कर दिई हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेसिबीका ठेकेदार ईश्वरपुर नगरपालिका–३, का ३५ वर्षीय प्रेमराज दाहाल र जेसिबीका चालक हरिपुर नगरपालिका वडा नं. .१ हजारबिघा बस्ने ३८ वर्षिय रविन भन्ने हर्कबहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । असार १२, २०७८
हेलम्बुमा बाढीले प्रहरी चौकी र वडा कार्यालय बगायो सिन्धुपाल्चोकमा बाढीका कारण केही कार्यालय र विद्यालय भवन बगेका छन् । यही असार १ गतेदेखि निरन्तर वर्षासँगै आएको बाढी अझै रोकिएको छैन । असार ५, २०७८